Xog uruurin la sameeyay ayaa muujineysa dadka isticmaala iOS | Wararka IPhone
Doorashooyinka naclada Waxaa loogu talagalay inay naga dhigaan inaan wax yar fikirno, laakiin waa lagama maarmaan inay ogaadaan ra'yiga guud ee dadka ee ku saabsan siyaasadda, farsamada ama wixii soo kordha. Munaasabaddan, sahan ayaa lagu sameeyay Maraykanka oo caddeeya in badan oo ka mid ah dadka isticmaala macruufka.
Sida muuqata, dadka isticmaala iPhone XR ee Mareykanka ma yaqaaniin sida loo kala saaro qaabkeeda qaarna xitaa waxay aaminsan yihiin inay leedahay farsamada 5G. Maaha wax qarsoodi ah in aqoon la’aan badani ka jirto dhulka casriga ah laakiin… dadka isticmaala iPhone-ka ayaa ah kuwa ugu badan ee iibsada iyagoon ogayn?
Tani doorashada de Decluttr waxaa ku jira 2.000 oo isticmaaleyaal ah iyo milkiilayaasha iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, Galaxy S7, Galaxy S8 iyo Galaxy S9 +. Xulashada xiisaha leh ee loo yaqaan 'terminals' oo aanan wax badan ka faalloon doonin, inkastoo xaqiiqda ah in Apple ay ku dhowdahay 50% suuqa taleefannada gacanta ee casriga ah ee Mareykanka. Noqo sida ay noqon karto, kaliya 44% dadka isticmaala iPhone XR ayaa awood u leh inay si dhakhso leh u aqoonsadaan terminaalka gacmahooda ku jira, taasi waa, 6 10kiiba XNUMX macno ahaan ma yaqaanaan iPhone-ka ay haystaan, ka soo horjeedka 71,32% ee isticmaalayaasha Galaxy S9 + oo u aqoonsada dhibaato la'aan.
Kaliya 14% dadka isticmaala macruufka waxay ogyihiin in iPhone-keedu leeyahay NFC chip
Qiyaastii 14% dadka isticmaala macruufka ayaan ka warqabin in taleefannadooda ay yihiin kuwo aan biyuhu xirin
Dhinaca kale, Inta badan adeegsadayaasha xarumahaan Samsung waxay rumeysan yihiin in aaladooda ay awood u leeyihiin inay ku xirmaan shabakadaha 5G, wax runta ka fog ma jiraan. Si kastaba ha noqotee, waa sida walwal leh in la arko in ku dhowaad 30% dadka isticmaala macruufka ay sidoo kale aaminsan yihiin bayaankan. Waxaad arki kartaa natiijooyinka buuxa ee sahanka Halkan, laakiin waxay mar kale ka tarjumayaan jahliga adeegsadayaal badan oo ku saabsan boosteejooyinkooda. Xaaladdan oo kale, jawaabeyaasha badankood waxay leeyihiin qalab macruufka ah, si kastaba ha noqotee, haddii sahankan lagu sameeyay Spain, suuq aad u ballaadhan oo leh joogitaan xoog leh oo ay leeyihiin Xiaomi, Huawei iyo Samsung, laga yaabee inaan sidoo kale la yaabno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Maxaad ka ogtahay casrigaaga? Sahanku wuxuu muujinayaa dadka isticmaala macruufka
Iima yaabin. Waan ogahay dhowr qof oo leh IPhone X kaliya inay wicitaan wicitaan sameeyaan. Waxaan ku adkeynayaa: kaliya inaad wacdid taleefan. Iyagu ma xiiseeyaan ama xiiseynayaan inay bartaan dhammaan fursadaha IOS leedahay. Haddii ay ku arkaan adiga oo sameynaya wax ka baxsan waxyaabaha caadiga ah, way layaabaan markay ogaadaan in taleefankooda gacanta uu sameyn karo taas. Oo yaan la dhihin astaamaha taleefoonka ... Waxa ugu daran waxa weeye in dadkaas ay yihiin kuwa markaa sii sheegaya iyagoo aan wax fikrad ah ka helin in IPhone uu yahay taleefan sida phone 200 telefoon ah. Dabcan, dabcan…